स्वर्गदूदतहरू, मानिसको सृष्टि र पतन
स्वर्गदूतहरू र मानिसको सृष्टि र पतन
अनादिकालमा परमेश्वर आफैमा पूर्ण र सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, आफैमा पूर्ण विश्वाम र शान्तिले सिद्ध - सर्वसम्पन्न र अभावरहित हुनुहुन्थ्यो।
(क) यसकारण परमेश्वर आफ्नो सृष्टिदेखि पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र अलग हुनुहुन्छ (यूहन्ना १:१-३ भजनसंग्रह ९०:२, १ तिमोथी ६:१६, हितोपदेश ८:२२-३० लाई कलस्सी २:३ सित दाँज्नुहोस्)।
(ख) उहाँ जे हुनुहुन्छ परमेश्वर अनादिकालमा उही हुनुहुन्थ्यो र अनन्तसम्म उही हुनुहुनेछ। परमेश्वर कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न।
परमेश्वरसित अनन्त जीवन छ। उहाँको न शुरू छ न अन्त। यूहन्ना १:१-४ उत्पत्ति १:१ यूहन्ना ५:२६ यूहन्ना १४:६ यूहन्ना १७:३।
परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। मलाकी ३:६, हिब्रू १:१२, हिब्रू १३:८, याकूब १:१७, भजनसंग्रह १०२:२४-२७।
परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँको नाप्दै नसकिने, सिद्ध, अनन्त उपस्थिति सर्वत्र छ। उत्पत्ति २८:१५, भजनसंग्रह १३९:१५, मत्ती २८:२०।
परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग सब कुराको सिद्ध, पूर्ण, असीमित, अनन्त ज्ञान छ। यशैया ४६:१० होतोपदेश १५:३,११, भजनसंग्रह १३९:२,४,१२-२४ हिब्रू ४:१३
परमेश्वर बुद्धिमान हुनुहुन्छ। परमेश्वर सधै सर्वोत्तम लक्ष्य रोज्नुहुन्छ अनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने सर्वोत्तम उपायहरू रोज्नुहुन्छ। हितोपदेश ३:१९, हितोपदेश १:१७ एफेसी १:७-८ कलस्सी १:९,२८ कलस्सी २:३, कलस्सी ३:१६।
परमेश्वर सर्वसक्तिमान् हुनुहुन्छ। उहाँसँग सारा सामर्थ्य छ। उहाँ सामर्थ्यमा असीमित र अनन्त हुनुहुन्छ। परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। उत्पत्ति १:१-३, उत्पत्ति १७:१, उत्पत्ति १८:१४, यशैया ४४:२४, लुका १:३४,३८, फिलिप्पी ३:२०-२१, फिलिप्पी ४:१३।
परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। उहाँ नै परम वास्तविकता हुनुहुन्छ, उहाँका वचन, उहाँका मार्ग, उहाँका काम सत्य छन्। उहाँ आफ्नो वचनामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यूहन्ना १४:६, प्रकाश १५:३-४, गन्ती २३:१९, तीतस १:२।
परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफूमा पूर्णरूपमा सिद्ध र विशुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ ठीकको श्रोत र मापदण्ड हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा, आफ्नो सोचाइमा र गराइमा ठीक हुनुहुन्छ। यशैया ६:३।
(अ) परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा ठीक हुनुहुन्छ, आफ्नो सोचाइमा, आफ्नो गराइमा ठीक हुनुहुन्छ। भजनसंग्रह ४७:८, भजनसंग्रह ९६:९ भजनसंग्रह ९७:१-२, २ कोरिन्थी ५:२१, पत्रुस १:१५-१६।
(आ) परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो धार्मिकतालाई लागु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो नैतिक विशुद्धताको आधारमा सब कुराको न्याय गर्नैपर्छ। उहाँ सधै न्यायोचित हुनुहुन्छ। यूहन्नाl १७:२५, २ तिमोथी ४:८, प्रकाश १६:५।
परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वर अनन्तरूपमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, आफ्नो सत्यता र पवित्रताअनुसार र आफ्नो महिमाको निम्ति सब कुरा नैतिकरूपमा आफ्नो पुत्रको रूपमा ढालिऊन् भनी आफ्नो मनसायलाई पूरा गर्न उत्प्रेरित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम परम र अनन्त छ। १ यूहन्ना ४:७-१०, यूहन्ना ३:१६, यर्मिया ३१:३।
(अ) परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो मानवीय दु:ख हटाउन, हामीलाई बचाउन आफ्नो प्रेमले अभिप्रेरित बन्नुहहुन्छ। प्रस्थान २:२४-२५, १ पत्रुस १:३।
(आ) परमेश्वर भला हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो जीवन र आशिषलाई अभिव्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ। प्रस्थान ३४:६, भजनसंग्रह २३:६, रोमी २:४, ५:९।
परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै सृष्टिमाथिको सर्वोच्व व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीमाथि राज्य गर्नु उहाँको एकलौटी अधिकार हो। कलस्सी १:१६-१७, हिब्रू ६:१३, दानिएल २:२१, एफेसी १:५,११।
अर्ती: परमेश्वरको अनन्त गुण र स्वभावको हरेक पक्ष तपाईको वर्तमान अवस्थामा कसरी सम्बन्धित छ? त्यसबारे सोच्नुहोस् र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्।
(ग) परमेश्वरले आफ्नो इच्छामा, आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, बाँड्न, आफैलाई महिमा ल्याउन स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्न रोज्नुभयो।
(१) भजनसंग्रह १४८:१-५ कुन शब्दले सृष्टिले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनी बताउँछ?________ ( नौपटक उल्लेख गरिएको छ।)
(२) नहेम्याह ९:६
(३) स्वर्गदूतहरू कतिओटा छन्? (प्रकाश ५:११, ७:११) ________।
(४) स्वर्गदूतहरू के गर्छन्? हिब्रू १: ६-७,१४) _________________________।
(५) सृष्टि गरिँदा के स्वर्गदूतहरू उपस्थित थिए? (अय्यूब ३८:४-७) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍_____________-।
(६) सृष्टिमा परमेश्वरको सर्वोपरि उद्देश्य र योजना के हो?
(अ) प्रकाश ४:११
(आ) प्रकाश ५:१३
(इ) यशैया ४२:८
(ई) परमेश्वर आफ्नो स्वभावमा महिमित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भन्ना ले उहाँको व्यक्तित्वको वैभव, महत्व र योग्यता बुझिन्छ। परमेश्वरको प्रकटित महिमाचाँहि उहाँ को र कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश हो। सृष्टिमा केवल एउटै महिमाको लागि मात्र स्थान छ।
अर्ती: के तपाईको जीवनले परमेश्वरलाई मान्यता र प्रशंसा दिइरहेको छ? मानिसलाई लिएर परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन यदि उसले त्यो महिमालाई छुदैन भने।
(७) लुसिफर, परमेश्वरद्वारा सृजिएका स्वर्गदूतहरूमध्येमा एक, त्यो करूब जसले परमेश्वरकै सिंहासनलाई ढाक्दथ्यो र रक्षा गर्दथ्यो (इजकिएल २८:१२-१६), आफ्नो सुन्दरताको कारण घमण्डले फुल्यो। उसले आफूभित्र तर्क गर्यो कि उसको आफ्नो महिमा र परमेश्वरको महिमा जोडेर परमेश्वरकै भन्दा ठूलो उसको महिमा हुनेछ (पापले टेढा विचार ल्याउँछ)। यसरी परमेश्वरको सृष्टिमा पापले प्रवेश गर्यो। सृष्टिकर्ताको विरोधमा सृष्टिको इच्छा परिचालन गरियो। (यशैया १४)।
(अ) (यशैया १४:१२-१४) शैतानले स्वर्गलाई ओगट्न चाहयो। ख्रीष्टमा विश्वासी जनले ओगट्नेछ (यूहन्ना_ १४:१-६)।
(आ) शैतानले अरू स्वर्गदूतहरूमाथि अधिकार गर्न चाह्यो। ख्रीष्टमा विश्वासी जनले स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछ (१ कोरिन्थी ६:१-६)।
(इ) शैतान, अरू सब उनको अधीनमा हुने गरी टुप्पामा रहन चाह्यो।ख्रीष्टमा विश्वासी जनले सब कुरा प्राप्त गरेको छ (१ कोरिन्थी ३:२१-२२, ४:९, एफेसी ३:१०, २:६-७)।
(ई) शैतानले परमेश्वरको महिमा चाह्योी। ख्रीष्टमा विश्वासी जनले परमेश्वरको महिमा प्राप्त् गरेको छ (यूहन्ना १७:२२,२४)।
(उ) शैतान परमेश्वरकै बराबरीमा पुग्न चाह्यो। विश्वासी जन ख्रीष्टमा पुत्र बनेको छ, पूरा बढेको छोराको अधिकारले सम्पन्न धर्मपुत्र। विश्वासीहरू हकवालाहरू हुन्, ख्रीष्टसित साझा हकवालाहरू। साथै हामी परिवारको सदस्य भएकाले हामीले आफ्नो स्थान गुमाउन सक्दैनौ जसरी लुसिफरले आफ्नो गुमाए (यूहन्ना् १:१२, रोमी ८:१४-१७)।
(८) स्वर्गदूतहरूले प्रथमपटक परमेश्वरको इन्साफ देखे। यसअघि त्यस्तो कुन परिस्थिति आएकै थिएन। तर याद राखौं कि लुसिफरको पाप देखिएको थिएन। उसको पाप कहाँ थियो (यशैया १४:१३)? ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍__________। पाप भित्रबाट शुरू हुन्छ- शैतानमा जस्तै हामीमा पनि। होतपदेश २३३:१३, मत्ती १२:३३-३५, १५:१६-२०, यर्मिया १७:९-१० इजकिएल ३६:२६, हितोपदेश ४:२३।
(अ) लुसिफरलाई अपदस्थ गरियो। (मत्ती २५:४१)। अरू स्वर्गदूतहरूले यस बाहिरी इन्साफको भित्री कारण देख्‍न सकेन।
(आ) लुसिफरले मौका छोप्यो र परमेश्वरको बदनामी गर्न थाल्यो (इजकिएल २८:१६ मा "व्यापार" को अर्थ हो बदनाम, निन्दा चर्चा)। "परमेश्वर प्रेम हुन् भने आफ्नो सृष्टिलाई नरकमा कसरी पठाउन सक्छन? जस्तो दोषारोपण उसले गरेको हुनुपर्छ।
(इ) कतिपय स्वर्गदूतहरू शैतानको विद्रोहमा सम्मिलित भए। कतिजना? (प्रकाश १२:४) ________।
(९) परमेश्वरले आफ्नो इन्साफको सफाइ दिन अघि बढ्नुभयो।
(टिप्पणी: उहाँलाई सो गर्न बाध्यता थिएन । उहाँ पूर्णरूपमा धर्मी र न्यायी र प्रेमी नै भइरहनुभयो।) परमेश्वरले मानिसलाई स्वर्गदूतभन्दा केही कम (भजनसंग्रह ८:५, हिब्रु २:७) बनाउनुभयो उनीहरूले भन्दा थोरै प्रकाश ( परमेश्वरको हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान) पाएका, तर उस्तै स्वतन्त्र इच्छा भएका प्राणीको रूपमा।
(१) के मानिसले पेमश्वरको विद्रोह गरी पाप गर्ने छनोट गर्यो (उत्पत्ति ३:६-७)? _______?
(२) त्यस्तो अपराधको लागि त्यहा के थियो? (उत्पत्ति २:१७, रोमी ६:२३ क)? _________। उक्त सजाय के थियो? _________।
(३) के उक्त सजाय भोग्नेय काम भइसक्यो (रोमी ५:६-१२,१८-२१; ६:२३ख)? _________। उक्त सजाय कसले भोग्नु भयो? ___________?
(४) परमेश्वरले एकैचोटी सदाका निम्ति प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ दुवै प्रेमिलो, न्यायी र न्यायोचित हुनुहुन्छ। कतिपय स्वर्गदूतहरूले (जोहरूसँग बढी मात्रामा प्रकाश र ज्ञान थियो) परमेश्वरको विरूद्धमा छनोट गरे। मानिसहरू (केही मानिसहरू) जोहरूसँग कम मात्रामा प्रकाश भएर र अगावै पापको पक्षमा परेकाहरू भएर पनि परमेश्वरको पक्षमा छनोट गरे। वोद्रोही स्वर्गदूतहरूलाई साथै उहाँको विरूद्धमा छनोट गर्नेहरालाई अग्निगकुण्डमा पठाउनमा आफू पूर्णरूपमा धर्मी भएको कुरा परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुभयो। अनि विश्वास गर्ने जोसुकै मानिसहरूलाईन बचाउन उहाँ अनुग्रही र प्रेमीलो हुनुहुन्छ।
(५) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर तलसम्मै झुक्नुडभयो एक पतित, कम दर्जाको प्राणीलाई दलदले हिलोबाट तानेर ख्रीष्ट यशूमा उच्च पार्न, सबै प्रधानता र अधिकारीहरूभन्दा पनि माथिको ओहोदामा राख्न, उसलाई परमेश्वरकै हकवाला, ख्रीष्टसँग साँझा हकवाला बनाउन (भजनसंग्रह ४०:१-३; एफेसी २:१-१०)।
(६) के स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको न्यायपूर्ण इन्साफमा विश्वास गर्न पुग्छन्? के स्वर्गदूतहरूको द्वन्द समाधान गरियो? पक्कैग पनि । प्रकाश १६:७ मा स्वर्गदूतहरूको प्रशंसालाई सुन्नु्होस्। "अनि मैले अर्कोलाई वेदीबाट यसो भनिरहेका सुने: "साँचो हो, प्रभु सर्वसक्तिमान् परमेश्वर, तपाईका ________ र __________ छन्।" (साथै हेर्नुहोस् प्रकाश १९:१-२)।
अर्ती: हाम्रो महान् परमेश्वरलाई महानताको श्रेय दिनलाई हामी स्वर्गदूतहरूसँग सम्मिलित हुनेछौ। सँगै हामी भन्ने छौ " पवित्र, पवित्र, पवित्र, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर।" तर जब " अचम्मको अनुग्रहले बाँच्यो तुच्छ प्राण मेरो।" भन्ने कोरस शूरू हुन्छ, तब स्वर्गदूतहरू चुपचआप उदेक मान्नेछन्। " मजस्तो पापीलाई बचाउन क्रूसमा प्राण दिए।" भनी गाउनेहरूको महिमा र आनन्दमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् स्वर्गदूतहरू। कति उदेकको ओहोदा हाम्रो। कति भययोग्य जिम्मेवारी हाम्रो, साक्षी भई स्वर्गदूत ( र मुक्ति नपाएका मानिस) हरूलाईर्वशक्तिमान् परमेश्वरको अथाह अनुग्रह सिकाउन। परमेश्वरको प्रिय जन, मुक्त हुनुभएकोमा के तपाईको प्राण रमाउदैन!!!